Hiram-panoherana matanjaka ao Kenya sy Afrika Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Tsy afaka misaraka amin'ny tolom-panafahana afrikàna ny mozika
Mpanoratra Richard Wanjohi, Nwachukwu Egbunike Nandika (fr) i Abdoulaye Bah, imanoela fifaliana
Voadika ny 27 Avrily 2022 6:32 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Français, Português, English
« Hetsika fanoherana ny apartheid tany am-piandohan'ny andian-taona 90 » an'i Nagarjun nampiasàna ny lisansa CC BY 2.0.
[Raha tsy asiana fanamarihana manokana, mitondra mankany amina pejy amin'ny fiteny anglisy ny rohy rehetra]
Tsy misy hafa amin'ny fampiasàna ny mozika ataon'ireo Ogandey sy Nizeriàna mpanakanto ho entina manao fanamby amin'ny mpitondra sy ny famoretan'ny tafika, dia manao tahaka izay koa ireo mpanakanto manerana ny tanibe. Indro ny ampahany faharoa amin'ity andiany misy lahatsoratra roa ity izay anasongadinanay ireo mpiangaly mozika avy ao amin'ny tanibe ary mivoy mozika mandrisika ny fikatrohana sy ny fanoherana. Ho an'ny ampahany voalohany, jereo ato. Ato anatin'ity lahatsoratra ity, resahantsika ny mozikam-pitorohana ao Kenya sy Afrika Atsimo, ary ny anjara toerana miankina aman'aina tazoniny ao anatin'ny tolom-panafahana ny vahoaka.
Hatramin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany dia nisy fiovàna goavana ny tontolon'ny mozika ao Kenya ; noho ireo hiram-panoherana dia marobe ireo mpihira ao an-toerana no nahazo laza. Ohatra iray malaza ny an'itompokolahy Joseph Kamaru, kikuyu mpiangaly mozika nanana rakikira efa mihoatra ny 1.000. Teraka tao afovoan'i Kenya, nitrandraka fifangaroana tsy manam-paharoa nahitàna ireo gadona nentindrazan'ny kikuyu izy, nampivadiany tamin'ny feon-gitara, ny vata maro afitsoka ary indraindray ny angorodao. Matetika izy no mihira ireo hira misy ifandraisany amin'ny olana sôsialy, itarafana ny fivoaran'ny tanandehibe sy ny fahaleovantenan'ny firenena.
Kanefa, tamin'ny 1969 – taona enina monja taorian'ny fahaleovantenany – latsaka tao anaty adilahy pôlitika i Kenya taorian'ireo fifidianana nifandirana, nifanandrinan'ny antoko KANU teo amin'ny fitondràna tamin'izany fotoana izany sy ny avy amin'ny fanoherana KPU. Nampizarazara ny fiarahamonina izany, indrindra fa rehefa nisy namono andro antoandro be ilay pôlitisiàna malaza Tom Mboya [fr].
Ho an'io tranga io, nosoratan'i Joseph Kamaru ny hira iray « Aromaka » (« Enga anie hatahotra izy »), izay nikatsaka ny hanao fideràna ny antokon'ny mpitondra, saingy tsy nahababo olona maro noho ny fahitàna ny fitanilàny manoloana ilay famonoana.
Vato fahatsiarovana an'i JM Kariuki avy amin'i Mpigapicha, nampiasàna ny lisansa CC BY-NC-ND 2.0
Tamin'ny 1975, volana vitsy monja taorian'ny fifidianana iray hafa nifandirana be dia maty nisy namono ny pôlitisiàna iray hafa indray, tamin'ity indray mitoraka ity dia tao afovoan'i Kenya, Josiah Mwangi Kariuki, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe JM Kariuki. Itpkl JM Kariuki, izay tany am-piandohana dia mpomba ny governemanta, dia lasa iray tamin'ireo feo mpanakiana tena nisongadina manoloana ny fanavakavahana foko sy ny kolikoly tao anatin'ny governemanta, namorona ny fehezanteny hoe : « Lasa firenena misy olona folo mpanapitrisa sy mahantra folo tapitrisa i Kenya ». Noho ireo fanakianana ataony imasom-bahoaka, noraràna tsy hahazo manao fampielezankevitra izy ary voatery niditra tamin'ny fitetezana ny isam-baravarana sy ny fitsidihana tokantrano. Tamin'ny fahafatesan'i M. Kariuki tamin'ny 1975, nohirain'i M. Kamaru ny hira iray mitondra ny lohateny hoe « JM Kariuki » ho fisaonana ny fahafatesan'ilay maherifon'ny firenena, sy ho fanomezana voninahitra ilay namany manokana.
Io hira manokana io no iray tamin'ireo hirany malaza be mpividy indrindra, 75 000 no lafo nandritra ny herinandro voalohany nivoahany. Vetivety izy dia lasa lasibatry ny governemanta; ary tamin'ny Jona 1975, voaràra tsy azo nalefa tao amin'ny onjampeom-pirenena ilay hira, ny Voice of Kenya (amin'izao fotoana izao dia ny Kenya Broadcasting Corporation).
Tsy nijanona teo anefa ilay mpihira fa taorian'ny nahafatesan'ny filoha voalohany tao Kenya, Jomo Kenyatta [fr], dia nanakaiky ny filoha manaraka izy, Daniel arap Moi [fr], izay nanasa azy hiara-hitsidika an'i Japàna. Izay no nitondra azy nankany amin'ny fanoratana ny « Safari ya Japan ». Na izany aza, tsy niandry fotoana ela dia efa nifanolana tamin'ny fitondràna tao an-toerana izy, ary dia lasa nanakiana indray. Nanoratra hira iray hafa izy, fifangaroana hainteny kikuyu sy fiteny manjavozavo ho fampitandremana ny governemantan'ny filoha Moi momba ny tsy fahafaliana sy ny hadisoam-panantenan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny, ary ireo Kikuyu manokana. Lohatenin'ilay hira ny hoe « Ni Maitho Tunite » («Ny fijerinay fotsiny no novànay ») . Voaràra tsy azo nalefa tamin'ireo onjampeo/TV-mpirenena ihany koa io.
Tsy nifarana teo ny fifamatoran'i M. Kamaru tamin'ny pôlitika tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny 1988, raha teo am-piomanana hiatrika fifidianana iray hafa ny firenena, nanoratra hira hafa iray izy, « Mahoya ma Bururi » (Vavaka ho an'ny firenena), izay, na tamin'ny fiteny kikuyu aza tany am-boalohany, dia nisarika ny sain'ny fanjakàna, indrindra fa ny filoha tamin'izany, Daniel Moi. Noheverin'ingahy io ho famelezana azy aloha ilay hira, tamin'ny filazàna hoe « guikio irima ta Daniel » izay raha adika dia hoe « natsipy tao an-davaka/an-davabato toa an'i Daniel ».
Ny fanazavan'i M. Kamaru dia nanosoka ny hoe ilay anarana « Daniel » dia manondro an'i Daniel voalazan'ny baiboly, izay natsipy tao an-davabato niaraka tamin'ireo liona noho izy nandà ny hiankohoka teo anatrehan'ny mpanjaka. Ho toy ny marimaritra iraisana, nangatahan'i M. Moi mba ho adika amin'ny fiteny swahili, teny nasiônaly, ilay hira. Na dia navoakan'i M. Kamaru aza ilay hira, tsy nalefa velively afa-tsy tamin'ny fiteny kikuyu ilay izy, izay nahatalanjona an'i M. Kamaru.
Ireo fifandraisana tsindraindray teo amin'ny hiran'i Joseph Kamaru sy ireo pôlitisiàna tamin'izany fotoana izany dia nidika fa raha marobe ireo pôlitisiàna nanandrana ny hanao jadona sy handràra hira, dia nanjaka kosa ny fihaonan-dàlan'ny famoronana, sy ireo olana sôsialy sy pôlitika ary ny feo iraisana amin'ny aretina mamely ny vahoaka. Mbola manakoako hatrany ao any anatin'ny toedraharaha misy ankehitriny ao Kenya ireny olana ireny.
Niaina vanim-potoana Apartheid[fr] ity firenena any amin'ny tendro atsimon'ny tanibe afrikàna ity, fony ireo Boers avy amin'ireo fotsy hoditra vitsy an'isa nitondra ny firenena sy nanjakazaka tamin'ireo mainty hoditra maro an'isa. Nanomboka ny 1948 hatramin'ny andian-taona 1990 izany. Hita nandritra io vanim-potoana io ireo tsy rariny natao an'iretsy farany ary marobe tamin'ireo mpitarika pôlitika tao aminy no nosamborina sy nahiboka mandra-pahafatiny.
Miriam Makeba 2011.jpg avy amin'i Tom Beetz . Nampiasàna ny lisansa CC BY 2.0
Nikatsaka ny ho lasa feon'ireo tsy mba miloa-bava, nisy vitsivitsy ireo afrikàna tatsimo nampiasa ny asany hisarihana ny saina nanerana ny firenena sy tany ivelany momba ireo olana tamin'izany fotoana izany. Isan'izy ireny i Miriam Makeba [fr]. Nohirain'ity ramatoa ity, nalaza tamin'ny mozikany isankarazany tamin'ny fiteny xhosa sy anglisy, ny «Beware, Verwoerd ! (Tandremo, ry Verwoerd) (Ndodemnyama) », manondro ny Praiminisitra afrikàna tatsimo tamin'izany fotoana izany, Hendrick Verwoerd, izay nitàna anjara toerana fototra tamin'ny fametrahana ny fitondràna apartheid. Voaràra tsy azo nalefa tamin'ny onjampeom-pirenena ilay hira noho izy mijoro manohitra ny apartheid.
Tamin'ny 1960, voatery nandeha nanao sesitany ny tenany i Makeba, ary vetivety foana dia voaràra tsy nahazo niverina tao Afrika Atsimo. Lasa fitaratra erantany izy tao Etazonia ary nanohy nanao fampisehoana sy nanoratra hira fanoherana niampanga ny apartheid nanerana izao tontolo izao.
Fotoana fohy taorian'ny fitsaràna an'i Makeba, niteraka resabe ny momba an'i Brenda Fassie [fr] nandritra ny ankamaroan'ny fotoana niasàny. Izy no nihira ilay hira « Black President » ho fanomezana voninahitra an'ilay « gadra nalaza indrindra » tamin'izany fotoana izany, Nelson Mandela. Fassie sy Chicco Thwala no nanoratra ilay hira tamin'ny 1990. Tamin'izany fotoana izany dia tonga teo amin'ny fara-androny ny governemantan'ny apartheid, ary efa ho afahana i Mandela. Mbola noraràn'ny governemanta foana ireo hiran'i Fassie noho ireo adihevitra miteraka resabe momba ny fananahana sy ny olana sôsialy teny amin'ireo tanàna tsizarizary tao Afrika Atsimo.
Johnny Clegg & Savuka Third World Child avy amin'i vinylmeister, nampiasàna ny lisansa CC BY-NC 2.0
Hira afrikàna tatsimo iray hafa ny « Asimbonanga », nohirain'i Johnny Clegg sy ny Savuka Band, noraràn'ny governemanta apartheid. Amin'ny fiteny zoulou midika hoe “Fifohazana” ilay hira, ary nivoaka tamin'ny 1987 tao anatin'ny rakikiran'i Clegg, « Third World Child ». Samy noresahany i Mandela sy Steve Biko, noheverina ho toy ny mari-pamantarana ny hetsika manohitra ny apartheid sy nikatsaka ny hahazo ny rariny ho an'ireo vondrompiarahamonina indizeny afrikàna tatsimo. Manana fiaviana jiosy, zimbaboeàna ary Ecossais i M. Clegg, namondrona ny tarika voalohany nahitàna foko maro tao Juluka [fr] ary taty aoriana dia tao Savuka [fr]. Nitombo tany amin'ireo faritra sasany tao Zimbaboe (na i Rhodésie fahiny) talohan'ny nifindran'ireo ray aman-dreniny nankao Johannesburg, Afrika Atsimo. Izany dia nitarika azy hiatrika ny hirifiry iainan'ireo vitsy an'isa ao Jo'burg sy tany amin'ireo tanandehibe hafa. Nianatra ny fiteny zoulou ihany koa izy, teny ifampiresahana ao an-toerana, izay lasa iray tamin'ireo nentiny nanasoniavana ny hirany.
Ny dikan'ny ankamaroan'ireny hira sy mpiangaly mozika ireny, dia ny teny faneva iraisan'ny fanoherana sy ny fitenenana manohitra ireo aretin'ny fiarahamonina ary ny fanavakavahana, na toy inona toerana sôsialy sy toekarena nisy azy. Ireny hira ireny, na dia tsy re tanaty onjampeo nandritra ny fotoana vonjimaika aza, dia afaka naseho masoandro sy nameno ny onjampeontsika, nahafahan'ny vahoaka avy amin'ny firenena rehetra nihaino sy nianatra ireny zava-nahagaga ara-mozika ireny.
Jereo ato amin'ny Spotify ny lisitra nataon'ny Global Voices manasongadina ireny hira ireny sy ireo hira hafa voaràra manerana izao tontolo izao. Raha mila fanampim-baovao misimisy kokoa momba ny mozika voaràra, tsidiho ny fandrakofana manokana ataonay, Striking the Wrong Notes (Mamalan-kira).